Iimpazamo ezi-5 zohlahlo-lwabiwo mali zokuZiphepha Martech Zone
Enye yezona zinto zabelwana ngabantu esazenzayo kukuthetha Uhlahlo-lwabiwo mali lwe-SaaS Kwaye kanye yipesenti yengeniso iyonke echithelwe ezinye iinkampani ukugcina nokufumana isabelo sentengiso. Ngokumisela uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwipesenti iyonke yengeniso, ibonelela iqela lakho lokuthengisa ukuba lonyuse ngokunyuka ibango njengoko iqela lakho lokuthengisa lifuna njalo. Uhlahlo lwabiwo-mali olucwangcisiweyo luvelisa iziphumo ezisicaba… ngaphandle kokuba ufumana ukonga kwindawo ethile kumxube.
Le infographic evela kwiNtengiso ye-MDG, Iimpazamo ezi-5 ezinkulu zoHlahlo-lwabiwo mali zokuZiphepha, ibonisa iindawo ezintlanu apho iimpazamo kwisigwebo zikhokelela ekusebenziseni ngokungafanelekanga kunye nendlela yokubeka phambili ixesha lakho, amandla kunye nohlahlo-lwabiwo mali xa uphumeza iindlela zokuthengisa.
Iimpazamo Zohlahlo-lwabiwo mali:
Ukuqala ngeDatha engeyiyo -Iinkampani zikholelwa ukuba i-32% yedatha yabo ayichanekanga, ngokomndilili. Idatha engathembekiyo, eqala ngokungachanekanga kubahlalutyi iideshibhodi ukuya kwizikhewu eziphambili kulwazi lwabathengi, zidibanisa ngokuthe ngqo kukhetho olubi lohlahlo-lwabiwo mali.
Ukusilela ukulungelelanisa ukuthengisa - I-50% yabathengisi abanelisekanga kwimizamo yabo yokuthengisa. Lonke uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa kufuneka luphuhliswe ngokudibeneyo namanye amasebe, ngakumbi ukuthengisa. Ngapha koko, inkcitho nganye kufuneka idityaniswe ngokuthe ngqo kwisiphumo esilindelweyo seshishini.
Ukutyala imali kwii-Workhorses eziQinisekisiweyo - I-52% yabathengisi ithi i-imeyile yenye yeendlela ezisebenzisayo kodwa abathengisi bahlala betyhala uhlahlo-lwabiwo mali kwezinye iindlela ngaphandle kokusebenza kwe-imeyile. Kubalulekile ukuqhubeka nokwandisa utyalomali kwinto esele isebenza.
Ukujongela phantsi iSantya soTshintsho- Kwi-2017, kwidijithali kuqikelelwa ukuba kuya kubalelwa i-38% yenkcitho yeentengiso zase-US iyonke, kwaye inani leetekhnoloji ezintsha ziyavela ezinokugcina ukunyuka okukhawulezileyo okubonelelwe yidijithali kule minyaka izayo.
Ukuphonononga okuncinci kakhulu, ngokungaqhelekanga -I-70% yeenkampani ayivavanyi imikhankaso yokuthengisa kunye nabathengi rhoqo. Abathengisi kufuneka bavavanye ngokukhawuleza kwaye banciphise phakathi kweendlela zokuthengisa, iziteshi, kunye nezicwangciso usebenzisa i Isicwangciso sokuthengisa esikhawulezayo.
tags: idatha embiibhajethiutshintshaIinkcukachaemail MarketingukuvavanyaurhweboUhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisaentshaUkunika amandla ukuthengisauvavanyo
Ukuziqhelanisa nokuPhendula kwiiMpendulo zeMoto kwiZiphumo zokuThengisa uMxholo
Aug 14, 2017 ngo-10:02 PM
Ngoku ndingu-COO we-incubator yasedolophini apha e-Indy, i-Grindery. Kwaye into enye endingenakubonakala ndiyiqhuba ekhaya ngokwaneleyo kukubaluleka kwedatha. Siphila kwihlabathi elinedatha eninzi, i-analytics, kunye nobuchule bokusebenzisa ngokwenene olo lwazi ukwenza izigqibo ezi-SMARTER. Nangona kunjalo, ndinencoko eqala ngokuthi, “.. Ndiziva ngathi..” okanye “…ibonakala njani kum…” . Ndiyabuza, luhlobo luni lwesampulu osithathileyo? Ibonisa ntoni loo datha?
Le infographic epholileyo kakhulu, kwaye enkosi ngobulumko bakho. Ngoku, ndiye kwi-webinar kwezinye ii-imeyile